Umaka: uhlu lwabamnyama lwe-imeyili | Martech Zone
Maka: i-imeyili uhlu lwabamnyama
NgeSonto, Okthoba 19, 2014 Douglas Karr
IBlackBox izichaza njengedatha ehlanganisiwe, evuselelwa njalo cishe yonke ikheli le-imeyili elithengwa ngenkuthalo futhi lithengiswe emakethe evulekile. Isetshenziswa kuphela ngabahlinzeki be-imeyili (ESPs), ukuze unqume kusengaphambili ukuthi ngabe uhlu lomthumeli lususelwa kwimvume, luyi-spammy, noma luyingozi ngokweqile. Izinkinga eziningi abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili abangena kuzo ngogaxekile be-fly-by-night abathenga uhlu olukhulu, balungenise kungxenyekazi yabo, bese beluthumela ku
Umhloli WeMeyili: Ithuluzi Lamahhala Lokuhlola Incwajana Yakho Ye-imeyili Ngokuphikisana Nezinkinga Ezivamile Zogaxekile
NgoLwesibili, ngoJulayi 8, i-2014 Douglas Karr
Besilokhu siqapha amaphesenti wethu we-imeyili engenayo nabalingani bethu ku-250ok futhi sithola imiphumela emihle. Bengifuna ukujula kancane ekwakhiweni kwangempela kwe-imeyili yethu futhi ngithole ithuluzi elikhulu elibizwa ngokuthi i-mail tester. Umhloli wemeyili uhlinzeka ngekheli le-imeyili elihlukile ongathumela kulo incwadi yakho yezindaba bese bekunikeza ukuhlaziywa okusheshayo kwe-imeyili yakho uma kubhekwa amasheke we-SPAM avamile ngezihlungi ezingafuneki. I-
Uma uthumela i-imeyili eningi kusuka kuhlelo lwakho lokusebenza lokumaketha nge-imeyili, udinga ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho ligunyazwa abahlinzeki abakhulu be-Intanethi. Ngike ngabhala ngaphambilini ngokugunyaza i-AOL ne-Yahoo! Namuhla sithole ukuthi kungahle kube nenkinga lapho isiza sethu singavinjelwa khona yiComcast. IComcast inemininingwane ethile yokutshela ukuthi ivimba i-imeyili yakho noma cha. Ngibhale ku
Besihlola elinye lamasayithi amaklayenti ethu namuhla. Bazothuthela ekuhlanganisweni kwethu kwe-imeyili kungekudala - okuyinto enhle. Ngicabanga ukuthi amawebhusayithi abo cishe asevele efakwe ohlwini lwabamnyama ... yingakho… Banefomu lokuxhumana kwiwebhusayithi yabo. Kuhle ngokwanele, isixha sezinkambu zokuthumela yonke imininingwane yakho yomuntu siqu ukuze babhalisele isinyathelo sabo se-imeyili. Ukubhekisisa, noma kunjalo, futhi kumane kuyithuluzi